/blog/Gallery/Sidee loo Isticmaalaa Qorshaha Trenbololone si uu u qaso Trenbolone Enanthate budada 2019
Posted on 05 / 21 / 2019 by Dr. Patrick Young ku qoray Gallery.
Waa maxay Trenbolone Enanthate?
Trenbolone E (Trenbolone enanthate) waa mid ka mid ah steroids oo lagu kala saari karo sida xoogga ah ee dheellitiran ee ku darsaday muruqyada. Inkastoo markii hore loo adeegsaday koritaanka murqaha xayawaanka, baahida ay ka qabaan jirdhiska jirka ayaa koray mudo sanado ah sababtoo ah waxtarkeeda muruqyada.
Tren E (Trenbolone enanthate) waa qaabka ugu dheer ee loo yaqaan "trenbolone" waxaana uu leeyahay heer nuugid ah oo dheellitiran. Sidaa awgeed, qiimaha uu ka baxo jirku waa mid gaabis ah. Waxay leedahay nus ah laba iyo toban maalmood, taas oo ka dhigaysa inay hoos u dhacdo wakhtiga ugu sarreeya. Si kastaba ha ahaatee, nolosha nuska ah ee nolosha, si kastaba ha ahaatee, waxay gacan ka geysataa tallaabooyinka dheeraadka ah ee anabolic.
Sida loo Isticmaal qajiinka trenbolone si aad ugu darsato shenbolone enanthate budada
Waxyaabaha aad u baahan tahay inaad diyaariso
Cuntada Trenbolone Enanthate
100mg / mL Cuntada Trenbolone Enanthate ee 100mL
10g Trenbolone budada enanthate (7.5mL)
Saliid 5mL Grapeseed
22um Fiirfalka Syringe
3mL iyo 20mL / 60ml syringe oo leh irbadda 18-21
Dhowr xaashiyo yar yar
Heer dijitaal ah (+ -0.1 ama 0.01)
Trenbolone Enanthate tallaabo Homebrew talaabo talaabo
-Step 1: Culus steroid trenbolone budo ah
-Step 2: Ku dar budada trenbolone, BA, iyo BB ee xajinta
-Step 3: Ku garaac balsa barkadda biyaha
-Step 4: Ku dar saliid canab ah
-Step 5: Sifeynta
-Step 6: Ku xejin kari kari koofiyado
Tallaabada 1: Miisaanka steroidka trenbolone enanthate budo
Isticmaal qashinka caanaha leh ee trenbolone si aad u sameyso saliidda enantahte saliidda, talaabada ugu horeysa ee aad qaadato waa inaad miisaantaa Trenbolone Enanthate budada gudaha xajmiga galaaska. Hubi in aad ku guulaysato saxsanaanta inta lagu gudajiro habka tartanka si aad uga fogaato in aad ka badan tahay ama ka yar tahay Tren Enanthate.
Tallaabada 2: Add trenbolone budada, BA, iyo BB ee xajinta
Ku dar Benzil Benzoate (BB) iyo Benzyl Alcohol (BA) iyo walaaq. Trenbolone cayriin ah ayaa bilowda in lagu burburiyo budada. Haddii aad rabto inaad kordhiso xawaaraha socodka, hubi tallaabada 3.
Tallaabada 3: U garaac xayndaabka biyaha qubeyska
Kuleylka biyaha ee qubeyska biyaha ayaa kordhiya xawaaraha geedi socodka. Biyaha waa inaysan kululaan, ha ahaato diirran maxaa yeelay heerkulka aad u sarreeya wuxuu u horseedi karaa qiiqa.
Tallaabada 4: Ku dar saliid canab ah
Ku dar saliidda canabka ah ee kuleylka ah isku dar ah isla markaana si fiican u walaaq. Iska hubi in aysan jirin miyir lahayn hormoon ka hor intaadan u gudbin habka sifeynta. Xaqiiji in hoose ee xayawaanku ay muujinayaan xalka rasmiga ah ee Trenbolone Enanthate.
Tallaabada 5: Sifeynta
U soo samee xalka sirinjooge ballaaran ama mid yar (midkani waa la soo celin doonaa dhawr jeer). Ku xir santuuqa iyo cirbadda sirinjiga oo ku shub masaasadda nadiifka ah.
Riix xalku iyada oo loo marayo sirinjiraha sirinjeerka si aad ugu riixdo cadaadiska. Ha isticmaalin cadaadis fara badan sababtoo ah tani waxay kala qaybin kartaa shaandhada siriinjaha waxaana laga yaabaa inaad ku dhameysato karbaash.
Haddii aad dareentid in habka sifeyntu uu yahay mid gaabis ah, waxaad bedeli kartaa sifeeynta sirinjiyada mar kasta oo la dhammeeyo xajinta 40ml
Tallaabada 6: Isku day in aad ku daboosho furka
Mar haddii lagugu sameeyo habka sifeynta, u xallib xalka.
Soo koobid, habka "Trenbolone e" ee nidaamku waa sida kor ku xusan, tallaabada ugu horreysa ee aad qaadato waa inaad miisaamaysaa budada Trenbolone Enanthate ee quraarad dhalada ah oo ku dar Benzyl Benzoate iyo Benzyl Alcohol (Waxaad ka iibsan kartaa budada Trenbolone enanthate online qaar ka mid ah steroids iibiyaha budada). Trenbolone cayriin waxay bilaabmaysaa inay ku milmto budada, laakiin haddii aad rabto inaad xawaareyso geeddi-socodka, waxaad ku dhaqi kartaa barbaariyaha biyaha qubeyska. Biyaha waa inaysan kululaan laakiin waa diirimaad maxaa yeelay heerkulka aad u sarreeya wuxuu u horseedi karaa qiiqa.
Ku dar saliidda canabka ah ee kuleylka ah isku dar ah isla markaana si fiican u walaaq. Iska hubi in aysan jirin miyir lahayn hormoon ka hor intaadan u gudbin habka sifeynta. U soo samee xalka sirinjooge ballaaran ama mid yar (midkani waa la soo celin doonaa dhawr jeer). Ku xir santuuqa iyo cirbadda sirinjiga oo ku shub masaasadda nadiifka ah.
Haddii aad dareentid in habka sifududeynta uu yahay mid gaabis ah, waxaad bedeli kartaa sifeeynta sirinjiyada mar kasta oo la dhameystiro 40ml. Marka lagaa dhejiyo xalka.
Trenbolone Enanthate Faa'iidooyinka
Halkaan waxaa ah labo ka mid ah faa'iidooyinka Trenbolone Enanthate ee miiska saaran marka aad go'aansato inaad isticmaasho.
- Waxay bixisaa kobaca murqaha
-In la joojiyo
-Ku talagalka xajinta nitrogen
-Ku tali heerarka cortisol ee jirka.
-Ardayda khasaare baruurta
Waxay bixisaa koritaanka murqaha oo dhakhso ah
Isticmaalidda Trenbolone Enanthate waa hab fiican oo kaa caawin kara inaad garato kartidaada buuxda haddii aad rabtay inaad ku guuleysato koritaanka murqaha oo deg deg ah.
Trenbolone Enanthate waa shaki kuma jiro in aad waxtar u leedahay in lagaa jarayo adigoo sii wadaya xajinta muruqa caanaha inta lagu jiro marxaladda goynta.
Horumarinta kaydinta nitrogen
Si ka duwan qaar ka mid ah steroids kuwaas oo muruqyada baaxada ay ka dhalatay sii-daynta biyaha, tayada miisaankaTenbolone Enanthate waxay sabab u tahay koritaanka nitrogen, taasoo keenaysa korriin joogto ah.
Xaddid heerarka cortisol ee jirka.
Trenbolone Enanthate waxay xakameysaa xaddiga cortisol taas oo kordhinaysa dib u soo kabashada iyo bogsashada ku darista durbadiintooda inta lagu jiro jimicsiga.
Gargaarka ku jira dufanka
Inta lagu jiro tababbarka, cayaartoyda badani waxay door bidaan isticmaalka tan oo ah tamarta tamarta halkii ay ku cuni lahayd istaarijin taasoo keeni karta miisaanka.
Lahaanshaha liiska ugu awoodda badan steroids, Trenbolone Enanthate waa inay ahaato mid ka mid ah steroids aad jeceshahay. Haddii aad qorshaynayso inaad bilowdo isticmaalka, taasi waa inaanay walwal gelin. Waxaad adigu go'aansan kartaa inaad ku soo gasho ama iibsato Trenbolone Enanthate onlayn.
Anabolic Steroids iyo Samaynta Them, Professor Frank, bogga 1-47
2019 Sida loo sameeyo testosterone si aad uhogaliso xannibaadaha 6 DECA budada-Ultimate Guide Sida loo sameeyo Nandrolone Decanoate (Durabolin)